Antony 5 hividianana bisikileta elektrika | Fanavaozana maintso
Antony 5 hividianana bisikileta elektrika
Adriana | | Toekarena an-trano, Fiara elektrika
ny bisikileta elektrika Manomboka hita tsikelikely ao an-tanàna izy ireo, misy ny tsy fahampian'ny vaovao momba ny tombotsoan'ity karazana fiara ity.
La fivezivezena ara-tontolo iainana amporisihina any an-tanàna mba mampihena ny fandotoana. Ny bisikileta elektrika dia safidy tsara hodinihina rehefa mifindra amin'ny toerana iray mankany amin'ny toerana hafa.
Betsaka ny olona tsy mahalala na manavakavaka an'ity karazana haino aman-jery ity. fitaterana maharitra.
Manome anao antony 5 hividianana bisikileta elektrika izahay:
Ny fepetra ara-batana tsara dia tsy takiana hikirakirana azy, noho izany mamela anao handeha haingana kokoa noho ny bisikileta mahazatra.
Ireo bisikileta ireo dia manome fivezivezena tsara ao an-tanàna amin'ny dia lavitra ary koa moto kely. Ny fahaleovan-tena dia miankina amin'ny fanaovana sy ny maodely fa eo anelanelan'ny 25 sy 40 km no misy azy ireo. Mety ho an'ny tanàna lehibe misy olana amin'ny fitohanana io.
Ny bisikileta elektrika dia mora vidy kokoa noho ny moto, ary kely ny fikojakojana azy.
Ny filana herinaratra dia tsy mila izany solika ary mora be ny mamerina ny batterie amin'ny socket rehetra.
Na iza na iza afaka mitondra azy, tsy mila fisoratana anarana na karazana fiantohana toy ny amin'ny moto ianao.
Misy maodely marobe sy toetra samihafa hisafidianana ny bisikileta elektrika mifanaraka amin'ny zavatra ilaintsika ary mety ho azontsika amin'ny vidiny.
Fampiasam-bola lehibe hividianana bisikileta elektrika satria mandoa vola haingana be ho an'ny vola kely fanampiny na fikojakojana. Tsotra sy manana kalitao tena tsara ny teknolojia, noho izany dia vitsy ny olana ara-teknika mitranga.
Raha liana amin'ny fikarakarana ny tontolo iainana, ny bisikileta elektrika dia fitaovana fitaterana maharitra.
Fantaro tsara alohan'ny hividianana bisikileta satria misy karazany maro ny mividy ilay mifanaraka amin'ny zavatra ilainao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Mitsitsy angovo » Toekarena an-trano » Antony 5 hividianana bisikileta elektrika
Fako biby hanao taratasy
Ny sisan'ny voatabia sy dipoavatra dia mampitombo ny famokarana biogas